Basale dengwane bekhishwa endlini | Isolezwe
Basale dengwane bekhishwa endlini
Isolezwe / 14 November 2012, 12:19pm / BAWINILE NGCOBO
EZINYE zezimpahla zomndeni wakwaKhumalo ezikhushelwe ngaphandle komuzi ISITHOMBE BONGANI MBATHA
UNKK Gelly Khumalo osale dengwane ekhishwa nomndeni wakhe endlini abesehlale kuyo iminyaka engu-20
UMUZI wakwaKhumalo kwaD eMlazi obangwayo ISITHOMBE BONGANI MBATHA
USALE dengwane umndeni wakwaKhumalo eMlazi kufika isikhonzi senkantolo nomyalelo wokuthi kukhishwe zonke izimpahla zawo ngoba umuzi osuhlale kuwo iminyaka engu-20 usuthengwe ngomunye umuntu.
Ngesikhathi kufika Isolezwe kwaKhumalo kwa-D izolo, izimpahla bese zigcwele ngaphandle ezinye zisakhishelwa ngaphandle.
Amalungu alo mndeni nomakhelwane bebesakhungathekile.
Umnikazi walo muzi, uNkk Gelly Khumalo (66), uthe le ndlu wayithenga ngo-1992 komunye umlungu ngo-R80 000. Uthe wadayisa indlu yakhe, wafaka leyo mali njengediphozithi yale ndlu, wabe esekhokha imali esele yaze yaphela.
Uthe inkampani yomlungu ayethenge kuye indlu yawa engakalitholi itayitela kodwa unazo zonke izincwadi ezikhomba ukuthi le ndlu ngeyakhe.
Uthe kusukela ngo-2004 kukhona obefika kule ndlu ezothi abaphume ngoba sekungeyakhe.
Lo mndeni uveza ukuthi izincwadi eziphethwe yilo othi usengumnikazi wale ndlu ziyasolisa ukuthi ngezomgunyathi ngoba zinezinombolo zetayitela ezingafani.
Indodakazi kaNkk Khumalo, uNksz Lungi Khumalo, ithe ngo-2004 kwafika umuntu thizeni bengekho washiya inombolo kumuntu osizayo wathi uphuma ebhange.
“Ngakusasa kwafika umuntu esethi uzobona indlu edayisayo, lo muntu esefake isikhangiso sokuthi indlu iyadayisa. Sathi uma sifona wathi indlu idliwe yibhange, saxakeka ukuthi kanjani ngoba asikaze sixhumane nabhange ngesikhathi siyithenga,” kusho uNksz Khumalo.
Uthe kusukela ngaleso sikhathi bekufika abantu abazobona indlu edayisayo.
Uthe ngo-2006 kuya ku-2007 bebehamba izinkantolo befuna ukuthi bangakhishwa kule ndlu kodwa kungaqondakali lutho ngaleli cala ngoba lo owayethi uyabakhipha wayengafiki.
UNksz Khumalo uthe ngo-2008 kube sekulokhu kufika lowo othi ungumnikazi womuzi ehamba nonogada befuna baphume.
“Sizamile sithinta abameli, sikhokha imali sifuna usizo kodwa asisizakalanga,” kusho uNksz Khumalo.
Lo mndeni usola ukuthi omunye walaba ababakhiphayo wakwazi ukuthola imininingwane yabo ngoba vele wayesebenzela inkampani edayisa izindlu, wabona ukuthi abakalenzi itayitela wabe esenza ubugebengu, wenza kuqala itayitela ukuze athathe lo muzi.
Ummeli, uMnuz Vikela Nhlokwana, obeqashwe yilo mndeni ukuthi awusize ekuqaleni kwalo nyaka uthe yena ufike sesivele siphumile isinqumo senkantolo sokuthi lo mndeni uphume kule ndlu.
“Angifikanga ngesikhathi kusakhulunywa ngalolu daba enkantolo, ngithole kamuva sengithi ngiyaqala ngiyalusebenza udaba, ngathola ukuthi inkantolo seyasithatha isinqumo sokuthi kumele lo mndeni uphume endlini. Into ebiyinkinga wukuthi kulo muzi bekufika abantu abangaqondakali okuwunogada namalungu omndeni lo omunye,” kusho uNhlokwana.
Uthe ngeke angene kweminye imininingwane ngalolu daba.
Owesilisa obengaphandle kulo muzi othe akathandi ukuthi kubhalwe igama lakhe ephepheni uthe uzomeseka umfowabo ofuna le ndlu.
Uthe ngesikhathi inkampani abalo mndeni ababethenge kuyo umuzi iwa, izinto ezazisegameni layo zafakwa endalini kubalwa nendlu.
“Ubhuti wathenga le ndlu kwi-auction ngo-2008 bathola imvume enkantolo enkulu yokuthi kukhishwe abangaphakathi. Le ndlu akukaze kube ngeyalo mndeni (Khumalo) kwasekuqaleni,” kusho lo wesilisa.